Enti Easter yɛ Kristofo dapɔnna?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nwoma bi kyerɛkyerɛ Easter mu sɛ, “ɛyɛ Kristofo afahyɛ titiriw a wɔde kae Yesu Kristo Wusɔreɛ.” (Encyclopædia Britannica) Nanso, yɛmmisa sɛ, Easter yɛ Kristofo afahyɛ?
Sɛ obi bɛtumi ahu sɛ adwinni bi di mu a, gye sɛ ɔgye bere hwehwɛ mu yiye. Enti sɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ Easter yɛ Kristofo afahyɛ a, gye sɛ yɛgye bere hwehwɛ ɛho nsɛm mu yiye.
Nea edi kan no, Yesu ka kyerɛɛ n’akyidifo sɛ wɔnkae ne wuo na ɛnyɛ ne wusɔreɛ. Ɔsomafo Paulo frɛɛ saa afahyɛ no “Awurade anwummeduane.”—1 Korintofoɔ 11:20; Luka 22:19, 20.
Afei nso, Britannica nwoma no ara san ka sɛ, amanne pii a wɔyɛ wɔ Easter bere mu no mfa Yesu wusɔreɛ ho hwee na mmom efi yɛn amammerɛ mu. Ma yɛmfa kosua ne adanko a ɛyɛ Easter ahyɛnsode a agye din paa no nyɛ nhwɛso. Nwoma bi ka sɛ: “Kosua no kyerɛ sɛ nkwa adi owuo so nkonim te sɛ nea akokɔ ba tumi pue fi kosua mu no.” Na ɛde ka ho sɛ: “Ná wɔgye di sɛ adanko yɛ aboa a ɔwo pii, enti wɔde gyinaa hɔ maa osutɔ bere anaa fefɛw bere.”
Ɔbenfo Philippe Walter yɛ obi a wasua nwoma ahorow a wɔkyerɛw no Yesu awoɔ akyi bɛyɛ mfe 500 bɛsi bɛyɛ mfe 1,500. Ɔkyerɛkyerɛɛ nea ɛyɛe a wɔde amanne ahorow a ɛte saa bɛkaa Easter afahyɛ ho no mu. Ɔkaa sɛ, sɛ ɔpɛ si ma afifide wu na edu osutɔbere na ɛsan fefɛw a, na abosonsomfo hyɛ ho fã. Enti bere a na wɔpɛ sɛ abosonsomfo dan bɛyɛ Kristofo no, wɔkaa sɛ wɔn afahyɛ ahorow no ne Yesu wusɔre no di nsɛ. Ɔbenfo Walter de kaa ho sɛ, ɛno ne ɔkwan titiriw a wɔfaa so de Kristofo afahyɛ ahorow bɛkaa abosonsomfo deɛ ho, enti anyɛ den amma nnipa pii sɛ wɔbɛba abɛyɛ Kristofo.
Abosonsomfo afahyɛ a wɔdanee no Kristofo afahyɛ no ansi wɔ asomafo no bere so, efisɛ asomafo no bɛyɛɛ osiakwan maa abosonsomfo. (2 Tesalonikafoɔ 2:7) Ɔsomafo Paulo bɔɔ kɔkɔ sɛ, ne “kɔ akyi no” ebinom “bɛsɔre akasa akyinkyim nsɛm de atwe asuafoɔ no adi wɔn akyi.” (Asomafoɔ Nnwuma 20:29, 30) Bere a asomafo no mu dodow no ara wui akyi no, ɔsomafo Yohane kaa sɛ na mmarima bi afi ase redaadaa Kristofo no. (1 Yohane 2:18, 26) Enti ɛno na ɛma wɔnyaa kwan de abosonsom afahyɛ bɛwurawuraa Kristosom mu.
“Mo ne wɔn a wɔnnye nnie nntwe kɔndua korɔ.”—2 Korintofoɔ 6:14
Ebia ebinom bɛka sɛ amanne ahorow bi a na wɔyɛ no Easter bere mu no nyɛ bɔne, efisɛ ɛmaa “abosonsomfo” bɛtee Yesu wusɔre no ase. Sɛ Paulo te ase saa bere no a, anka ɔremma kwan da! Bere a Paulo tutuu akwan wɔ Roma Ahemman no nyinaa mu no, ɔhunuu abosonsomfo afahyɛ ahorow, nanso, wamfa ne ho anhyɛ emu biara mu ansusuw sɛ ɛno bɛma wɔate Yesu ho nsɛm ase yiye. Mmom no, ɔbɔɔ Kristofo no kɔkɔ sɛ: “Mo ne wɔn a wɔnnye nnie nntwe kɔndua korɔ. Na twaka bɛn na tenenee ne amumuyɔ wɔ? Anaasɛ ayɔnkofa bɛn na hann ne sum wɔ? Enti momfiri wɔn mu, na monte mo ho,’ Yehowa na ɔseɛ, ‘na mommfa mo nsa nnka deɛ ɛho nteɛ.’”—2 Korintofoɔ 6:14, 17.
Dɛn na nsɛm kakra a yɛasusu ho yi ama yɛahu? Ama yɛahu pefee sɛ, Easter nyɛ Kristofo afahyɛ.
Yesu Wusɔre no De Nkwagye Ba!
Fa w’ani bu hwɛ, wubetumi atena ase daa a amanehunu, ɛyaw anaa awerɛhow biara nni hɔ.
Hena na Ɔbɔɔ Onyankopɔn?